ဘယ်လ်ဂျီယံခုနှစ်တွင်ရထားအားဖြင့်သဲသောင်ပြင်အားလပ်ရက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘယ်လ်ဂျီယံခုနှစ်တွင်ရထားအားဖြင့်သဲသောင်ပြင်အားလပ်ရက်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 02/10/2020)
သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်အဘို့, ဘယ်လ်ဂျီယံကြည့်ဖို့များစွာသောအံ့သြစရာမျက်မှောက်နှင့်အတူလက်ရာမြောက်သောရထားခရီးစဉ်များ၏၎င်း၏မျှတသောဝေစုရှိပါတယ်. အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံကမ်းခြေနေရောင်ခြည်အနားယူနှင့်ပျော်မွေ့နေတဲ့ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် 65 ကမ်းရိုးတန်းကီလိုမီတာ, အတွက်လုပ်ကြဖို့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်. အနားယူပါ နှင့် ရထားဖမ်း ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့ဦးတည်ရာမှ. ဤတွင်ကိုအကောင်းဆုံးသဲသောင်ပြင်အားလပ်ရက်အချို့ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရထားများမှာ.
သငျသညျကမ်းခြေမှထွက်သွားဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေ့ရက်ကိုရှာနေလျှင်ဤသည်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်နေရာဖြစ်ပါသည်. ထို့အပြင် "ဟုအဆိုပါပင်လယ်မှာစီးတီး" အဖြစ်လူသိများ, Ostend ကျော်ရှိပါတယ်9sunbathing အဘို့အဆင်သင့်လှပသောသဲကမ်းခြေ၏ကီလိုမီတာ. အလွန်ကြီးစွာသောလမျးလြှောကျသှားခွငျးနှင့်တစ်ခုအကွာအဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြတိုက်, စျေးဆိုင်, နှင့် စားသောက်ဆိုင် မြို့ထဲမှာ. မှ 28 ဇွန်လသည်အထိ 31 သြဂုတ်လ Ostend အဆိုပါသဲပန်းပုမှအိမ်ရှင်ကစားနှစ်စဉ် ပွဲတော် ပျော်စရာအများကြီးအရာဖြစ်ပါသည်! တစ်ဦးကသာ ဘရပ်ဆဲလ်ကနေအတိုရထားစီးနင်း, Ostend ကမ်းခြေ-မြို့အတွေ့အကြုံစုံလင်သည်.
Ostend ရထားမှ Antwerp
အမ်စတာဒမ် Ostend မှရထား
Ostend ရထားမှ Bruges
သငျသညျဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့မီးရထားပေါ်ခုန် အကယ်. Knokke-Heist န်းကျင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် 50 မိနစ်အကြာ. ဒီနေရာတွင်တဦးတည်းပဲမရှိ, ဒါပေမဲ့5သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေချစ်စရာကောင်းတဲ့ကမ်းခြေ. ဤသည်ဧရိယာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်, တစ်ဦးဂေါက်ကွင်းအပါအဝင်, အတတ်ပညာ ပြခန်း, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ, တစ် ဦး ယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှင့်တစ် ဦး မယုံနိုင်စရာသဘာဝအရံ Zwin ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်. လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာနှင့်အတူဤယူပြီးတန်ဖိုးရှိကမ်းခြေအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်.
Knokke-Heist ရထားမှ Antwerp
ရထား Knokke မှ Bruges
ပိုပြီးစွန့်စားနေသောသူတို့အဘို့, de Hanns အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုအလွန်ကြီးစွာသော option ဖြစ်တယ်. ဘရပ်ဆဲလ်ကနေမှသာတိုတောင်းတဲ့ရထားစီးနင်း, ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့နေရောင်ကုလားထိုင်နှင့်ငှားမရရှိနိုင်ကမ်းခြေ၏ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများနှင့်အတူတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် beachfront ကမ်းလှမ်း, လည်းပဲ အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော Anglo-Norman အဘိဓါန်စတိုင်အိမ်တွင်းနှင့် Villas. ဖြစ်နိုင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ငှားစက်ဘီးနှင့်သံသရာ လမ်းသို့မဟုတ်ကမ်းရိုးတန်းလမ်းကြောင်းတလျှောက်နှင့် ရှုခင်းကိုခံစား နှင့်ငန်လေကြောင်းရန်. တစ်ဘို့ ပြင်ပအတွေ့အကြုံ, ဤသူကား စုံလင်သောအရပျ.
ဂျန့်မြို့မှာ Ostend မှရထား
Ostend ရထားမှ Charleroi
Ostend ရထားမှ Liege
ဒါဟာအချို့ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အဆုံးစွန်ကမ်းခြေ destination သို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် မိသားစုပျော်စရာ. ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်များအတွက်လူသိများ ရေအားကစား ထိုကဲ့သို့သောလှော်များနှင့်ရေကူးအဖြစ်, လှေခရီးစဉ်များ, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ငါး, လှိုင်းယာဉ်ငယ်ပြိုင်ပွဲနှင့် surfing, အဖြစ်ကမ်းခြေနှင့်အသွားအလာ-အခမဲ့လမျးလြှောကျသှားခွငျးတလျှောက်တွင်အများအပြားအပန်းဖြေအဆောက်အ, Nieuwpoort လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုကမ်းလှမ်း. ဒါဟာမြို့ကဘရပ်ဆဲလ်ကနေဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူပြီးတစ်ဦးတို ရထားစီးနင်း ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်.
ဘယ်လ်ဂျီယံ တစ်ဦးအံ့မခန်းကမ်းရိုးတန်းနှင့်ရှိပါတယ် ရထားရန်လွယ်ကူ access ကို အားလုံးပိုပျော်စရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့အဲဒီမှာရတဲ့စေသည်! ကြိုးစားရန်လူတိုင်းကိုအမြဲအသစ်အရာတစ်ခုခုကိုကိုက်ညီဖို့ကမ်းခြေကိုဦးတည်ရာရှိပါသည်. ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရထားကဤကမ်းခြေအားလပ်ရက်တစ်ဦးထက်ပိုမိုသာယာသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဘာလဲ?
ဂျန့်မြို့မှာ De ပန်းမှရထား
Charleroi De ပန်းမှရထား
De ပန်းရထားမှ Liege
Saveatrain.com ကိုသွားပါ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ကမ်းခြေ အားလပ်ရက်များ travelbelgium